ह्वात्तै बढ्यो सबै विदेशी मुद्राको भाउ, हेर्नुहोस् कुन देशको कति पुग्यो ? – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Economic News/ह्वात्तै बढ्यो सबै विदेशी मुद्राको भाउ, हेर्नुहोस् कुन देशको कति पुग्यो ?
भने आज असार ११ गते कतारी रियाल एकको खरिददर ३३ रुपैयाँ १९ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३३ रुपैयाँ ३६ रहेको बहराईन दिनार एकको खरिददर ३२० रुपैयाँ ५ पैसा तथा बिक्रिदर ३२१ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ भने आज युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रिदर १ सय ५२ रुपैयाँ १ पैसा रहेको छ। त्यस्तैगरी आज मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २८ रुपैयाँ २९ पैसा तथा बिक्रिदर २८ रुपैयाँ ४३ पैसा रहेको छ।
तोलामा १० हजार रूपैयाँले घट्यो सुनको भाउ
आज सुनको मुल्य बढ्यो, तोलाको कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
साताको अन्तिम दिन कतिमा कारोबार हुँदैछ सुनचाँदी ?